Al-shabaab oo saaka dagaal xoogan kula wareegay Degmo ka tirsan Sh/Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Al-shabaab oo saaka dagaal xoogan kula wareegay Degmo ka tirsan Sh/Dhexe
Xubno ka tirsan Ururka Al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen degmada Raaga-ceelle ee Gobalka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo ay ku sugnaayeen Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Dadka degaanka qaarkood ayaa waxaa ay ku warameen in saaka aroortii hore ay Ciidamada dowladda, isaga baxeen degmada Raaga-ceelle, kadib markii ay weerar kusoo qaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Wararaka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ay ku sugan yihiin duleedka degmada, kuwaas oo aan ka qeyb qaadan dagaalka ka dhacay degmada Raaga-ceelle ee gobalka Shabeellaha Dhexe.
Al-Shabaab ayaa dhankooda warar ay ku daabaceen Baraha ay ku leeyihiin Internet-ka waxaa ay ku sheegteen inay dagaal kula wareegeen degmada Raaga-ceelle ee gobalka Shabeellaha Dhexe, waxaana weli la shaacin khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay.
Muddo hadda laga joogo Lix sano ayaa Ciidamada Dowladda oo kaashanaya kuwa AMISOM waxaa ay kala wareegeen degmada Raaga-ceelle dagaalamayaasha al-Shabaab, kuwaas oo Maanta lix Sano kadib dib ula wareegay.
Wararkii ugu dambeeyay Qarax khasaaro dhaliyey oo ka dhacay Gaalkacyo